Meydadka Ragii ka dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hotelka Dayax oo Baaritaano lagu wado - iftineducation.com
iftineducation.com – Ciidamada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya oo gacanta ku haya meydadka ragii ka dambeeyay weerarkii shalay lagu qaaday Hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho ayaa baaritaano ku bilaabay Meydadkaasi.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in qaar kamid ah Meydadka ragii weerarka fuliyay la aqoonsaday shaqsiyadooda, waxaan wali baaritaano lagu hayaa halka ay ka yimadaeen ragaas iyo kooxdii weerarka soo abaabushay.
Weerarkii shalay lagu qaaday Hotelka Dayax oo isugu jiray Ismiidaamin iyo mid toos ah waxaa ka dambeeyay shan nin oo mid kamid ah uu isku qarxiyay banaanka Hotelka halka afartana kalana lagu dilay banaanka Hotelka xili ay doonayeen in ay dhismaha galaan.
In ka badan 20-qof oo u badnaa dad shacab ah ayaa ku dhintay weerarkii xooganaa ee shalay subax lagu qaaday Hotelka Dayax, waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay dad ka badan 50-qof oo qaarkood dhaawacyo culus ku yaalaan.
Weerarkii lagu qaaday Hotelka Dayax ee Masuuliyadiisa sheegatay kooxda Al Shabaab ayaa kamid noqonaya weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana wali la dareemayaa raadadkii Murugada ahaa uu reebay Weerarkii shalay lagu qaaday Hotelka Dayax.